”Maxaad ku kordhisey farsamadii aabahaa!” – Akhri sheeko dhexmartay nin Yurub ka yimid & cid geeddi ah (Akhri oo ka faa’iidayso) | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada ”Maxaad ku kordhisey farsamadii aabahaa!” – Akhri sheeko dhexmartay nin Yurub ka...
”Maxaad ku kordhisey farsamadii aabahaa!” – Akhri sheeko dhexmartay nin Yurub ka yimid & cid geeddi ah (Akhri oo ka faa’iidayso)
(Hadalsame) 02 Maajo 2019 – Nin ajnabi ah oo u shaqeyn jiray hey’ad samafal ayaa mar uu safarkiisii u horreeyay ku yimid Soomaaliya bartamihii sagaashanaadkii ayaa u dhaqaaqay inuu kormeer ku soo maro tuulooyin dhowr ah oo ay hey’addiisa ka fulisay mashaariic kala duwan.
Asaga iyo dhallinyaradii degaanka aheyd ee u shaqeynaayay hey’adda ayaa wexey waddada kula kulmeen cid reer miyi ah oo guureysa. Ninkii caddaanka ahaa wuxuu kooxdii la socotay ka dalbay in la joogsado si uu sawirro uga qaato reerka geeddiga ah.
Dhowr sawir markuu qaatay ayuu turjubaankii Soomaaliga ahaa ee la socday weydiiyay haddey suurtagal tahay iney u dhawaadaan reerka guuraya si uu u wareysto.
Reerkii ayey ka daba tageen, salaan ka dibna gaalkii ayaa su’aalay odeygii reer guuraaga ahaa, wuxuuna weydiiyay:
1) Halka uu ka soo bartay xirfaddaan ay ka muuqato farsamada la yaabka leh ee uu ratiga u raran yahay.
2) Cidda bartay farsamadaas iyo 3) Muddada uu yaqaano?
Ninkii reer guuraaga ahaa wuxuu u sheegay ninkii caddaanka ahaa inuu ka bartay qaabka ratiga loogu guuro aabihii oo asagana ka bartay aabihii dhalay, asagoo weliba suulka iyo farta labaad isku dhufanaya (far-jaawin) oo muujinaaya inuu bartay qaabkaan muuddo aad u fog ka hor.
Gaalkii ayaa misana su’aalay oo yiri: ”awowgaa iyo aabahaa ma sidaan ayey u dhisi jireen ratiga marka ay guurayaan? Ninkii reer guuraaga ahaa ayaa ku jawaabay: ”haa, sidaan oo aan waxba ka beddelneyn ayey u guuri jireen.”
Gaalkii ayaa su’aal soo celiyay: ”waqtigii aabahaa waqti hore ayuu ahaa ee adiga maxaad ka beddeshay ama ku kordhisay farsamadii aabahaa?”
Ninkii xoolo dhaqatada ahaa ayaa ku jawaabay: ”waxba! Sidii uunbaan u raraa reerka.” Gaalkii ayaa qoorta raariciyay madaxana ruxay kaddibna ku yiri turjubaankii:
”Annaga reer Yurub ah dadkeenii hore xoolo dhaqato reer guuraa ah ayey ahaayeen, laakin wey fikiri jireen wexeyna mar walba isku dayi jireen iney horumar ku tallaabsadaan, horumarka aad Yurub ka arkeysid maantana halkaasuu ka soo billowday.”
Waxaan nahay dad aan fikireyn oo raba in horumarka saddaqo loogu keeno.
Waxaa Qoray: Cali C Cosoble
Previous articleMAAN-HAFAR: Sida ay u cilladaysan tahay aragtida ah ”Caqligu ha shaqeeyo!” oo qura!
Next articleNAQDIN: Xeer Ilaaliyuhu wuxuu qabtay shaqo dareen ahaan sax ah, balse sharci ahaan khalad ah (Daawo)